कुन दिमागले हो नारायणहिटी संग्रहालयमा ड्रिङस र डिनर पाटी गर्ने स्थल बनाउने
बुटवल । लगभग ३ शताब्दी सम्म राजाबाट संचालित राजतन्त्रात्मक देश १३ बर्ष अगाडी बिना अवरोध गणतन्त्रमा परिणत भए पछि खाली भएको नारायणहिटी दरबारलाई देशको महत्वपूर्ण संग्रहालयको रुपमा स्थापित गरी सर्बसाधरणको लागि खुल्ला गरिएको थियो । सर्बसाधारण नेपालीको लागि राजा बस्ने घर हेर्ने रहरलाई नेपाल सरकारले पुरा गरिदिएको थियो फलस्वरुप राजाको आलिसान महल देख्न पाए अनि सबैले आ-आफ्नो मनको कौतुहलता पोख्न समेत पाएका थिए। यस्तो देशको अमुल्य सम्पत्तीको संरक्षण गर्नु सरकारको...
विजय विश्वकर्मा मेरा स्कुले दमाली हुन जितेन्द्र बुढामगर, अहिले अमेरिकामा छन । गुल्मी तम्घास घर भएको म र रुकुम टकसेराका जितेन्द्रको दोस्ती हुनुमा माओबादी आन्दोलनको भुमिका छ । २०५२ बाट सुरु भएको माओबादी जनयुद्धले सुरुवातमै सबैभन्दा प्रभाव रुकुम रोल्पा मा पारेको थियो । जनयुद्ध समाज रुपान्तरण, राज्य रुपान्तरणको लागि गरिएको विद्रोह थियो । यो विद्रोहमा कोही स्वेच्छाले सहभागी भए । कोही जवरजस्ती रुपमा सहभागी भए । आप्mना मुटुका टुक्रा छोराछोरीहरुलाई माओबादीहरुले...
रत्नबहादुर बस्नेत हामीले पढ्न,सुन्ने गरेका छौं कि मानवजीवनमा तीन ‘द’ अर्थात् दान,दया र दम यी तीनको महिमा सर्वोपरि रहेको छ । जसलाई अपनाएर जीवनमा उच्चता प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको तीन ’द’ यसभन्दा भिन्न र विपरीत छ, जसले विकृति बढाउँछ,नीचता र पतन निम्त्याउँछ । जसलाई मानवमात्रको अभिषाप र विनाशको कारक मानिन्छ । जुन हिन्दी भाषामा चर्चित र प्रचलित छन ।ती हुन दारु, देरी र दोस्ती । मान्छे...
विजय विश्वकर्मा अहिलेको सत्ताधारी पार्टी होे डबल नेकपा यानेकी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ।डबल नेकपा सत्ताधारी मात्र हैन नेपालको (भन्न त दक्षिण एसियाकै भन्छन ) सबैभन्दा ठुलो कम्युनिष्ट पार्टी हो । मैले यहाँ यो कम्युनिष्ट शब्द लहैलहैमा लेख्या छु है सबैले कम्युनिष्ट भनेको हुँदा मैले पनि लेख्देको हो । यही डबल कम्युनिष्ट पार्टीका दुई मध्येका एक सुप्रिमोले २०७६र०६र०६ गते सहाना प्रधानको वार्षिकी कार्यक्रममा हामी कम्युनिष्ट जस्ता रहेनौ भनेर भाषण ठोकेको सुनेपछि म...
विजय विश्वकर्मा अहिले रेसुङ्गा नगरपालिका भो, साविकका ६ गाविस मिलाएर नगरपालिका बनेको छ । ठुलो नगरपालिका र जिल्लाकै मुख्य केन्द्र तम्घास हो । हामी बोलीचालीमा तमास भन्छम । एकातिर अर्जुन, अर्कोतिर रेसुुङ्गा यी दुई चुलीको काखमा तमास खाल्डो रहेको छ । रेसुुङ्गातिरको फेदीलाई खानिगाँउ भनिन्छ । खानिगाँउको माथिल्लो भेगलाई बुढीचौर, थुम्का, टुनीखोला, छापटोला, बाझीपोखरी भन्ने गरिन्छ । टुनीखोला र छापटोलाको बिचमा अलिअलि गहिरो भएर होला अरुले गैरा भन्छन । हो म त्यही...
काठमाडौं ।प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुसार ऐतिहासिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस बहालवाला संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो । संसदीय परिपाटीमा प्रमुख प्रतिपक्षी भनेको सत्तारुढ पार्टीलाई सही मार्गनिर्देश गर्ने, गलत गर्न नदिने र आवश्यक परे सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने दल हो । तर, कांग्रेस नेतृत्वले आफ्नो दल प्रतिपक्षी हो भन्ने तथ्य चटक्टै बिर्सिएको देखिँदै छ । वर्तमान सरकार बनेको डेढ वर्षमा दर्जनौँ ठूला भ्रष्टाचार काण्ड बाहिर आएका छन् । ती काण्डप्रति सरकारले ठोस कदम नचाल्दा सरकारमाथि...
सुरज उपाध्याय तिम्रै निम्ति बरु यो ज्यान गएँ गइजाला, तिमीसँग चोखो माया बस्यो जलजला। साँझ परिसकेको थियो। मेरो छेउमै आएर बस्यो सुनिल। ‘सर यो गीत म पनि गाउँछु।’ उसले संगीत र नसाको तालमा सोध्यो, ‘सुन्नु हुन्छ ?’ म हाँसे मात्रै। केही भनिन। ‘बिहेमा हामी बुढाबुढी खुब नाचियो यो गीतमा। मलाई सारै मन पर्छ। साँच्चै चुनु दिदीलाई त मारेछन् है।’ सुनिल केही मातेको थियो। उसलाई आफू मातेको अन्दाज हुँदो हो। भन्यो, ‘सोरी सर मैले दुई...
वीणा सिन्हा राजधानीको कृष्ण पार्टी प्यालेसमा १५० जना महिला नेपाल–भारतमैत्री सङ्घको केन्द्रीय महिला सदस्यहरूको निम्तामा जम्मा भएका थिए । कार्यक्रमको सुरुवात राष्ट्रियगानबाट भयो । आरम्भमा कार्यक्रम सञ्चालकले तीजको महŒव चर्चा गरे । मधेसी महिला वक्ताद्वारा तराईमा तीजको महŒव र मनाउने तरिकाको जानकारी प्रस्तुत गरियो । साथै अतिथि वक्ताहरूले तीजको पारम्पारिक महŒव र वर्तमानमा त्यसको उपयोगितामाथि प्रकाश पारे । महिला सशक्तीकरण तथा व्यक्तिकरणको माध्यमका रूपमा तीजको कार्यक्रम उपयोग गर्न सुझाव आयो...
बुटवल । हरेक सरकारी कर्मचारीले पाउने बिदा निजी जिवनका लागि हो । उसले विदाको समयमा हरेक मानव जिवनले जिउने हरेक खालको जिवन जिउन सक्छ । उसले घरमा मर–भाग भएर पनि विदा लिन्छ वा विवाह हर्ष बढाईमा रम्न–झुम्न पनि लिन्छ । सरकारले दिएको नियमित विदाको दिन उसले आफ्नी श्रीमति वा अविवाहित भए प्रेमीकालाई घुमाउन लैजान पनि सक्छ । ईच्छा अनुसार खाने पिउने कुराको त कुरै छाडौं । तर सञ्चार मन्त्री बास्कोटाले...
बुटवल । दाई, मैले विहे गर्दैछु भन्दै थिए ती भाईले । कहिले ? को संग ? को निधी खोजी गर्ने क्रममा सम्वन्धित किशोरीको परिचय पनि दिएका थिए उनले । अहिलेको माया प्रेमको चक्कर पनि बढो गजवको रहेछ आज विहान आँखा जुधाई साँझपख गहिरो प्रेम । अनि सके उसै राती शाररिक सम्पर्क नभए भोली त निश्चित ! त्यो पनि केटा पक्षले धेरै कर गर्नै नपर्ने । अर्को पक्षबाट एक वचन फाल्यो...